ရိုးရှင်းတဲ့ဝတ်စုံဆိုပေမယ့် Selena ဝတ်မှ ပိုလှသွားတယ်… – FemaleWear.net
ရိုးရှင်းတဲ့ဝတ်စုံဆိုပေမယ့် Selena ဝတ်မှ ပိုလှသွားတယ်…
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Friday night dinner ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ Selena Gomez တစ်ယောက်ကတော့ သူမရဲ့ပရိတ်သတ်တွေကို Thigh High Split Maxi Dress လေးနဲ့ အလှပဆုံးဖမ်းစားလိုက်ပြန်ပါပြီ။ သူမဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ပုံစံလေးက ရိုးရှင်းပေမယ့် Selena ဝတ်လို့ ပိုလှသွားတဲ့ ဝတ်စုံလို့ဘဲပြောရမလား ထွေထွေထူးထူး အလှအပဖန်တီးထားတာမရှိဘဲနဲ့ကို အမြင်ဆန်းပြီး မျက်စိကျစရာကောင်းအောင် လှပတဲ့ ဝတ်စုံလေးဖြစ်ပါတယ်။
HER LEGS HAVE ME WEAK. ? — @sel ?
A post shared by Selena Gomez ♡ (@sexlikeselena) on Feb 2, 2018 at 10:48pm PST
အသက် ၂၅နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ Selena ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော် တစ်ယောက်လည်းဖြစ် Coach campaign star တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Selena ကတော့ fashion queen လို့ တင်စားဖို့ ထိုက်တန်တဲ့ မိန်းမငယ်လေးတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း Selena ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ဝတ်စုံလေးကတော့ ရိုးရှင်းတဲ့ ဖဲသား dress အရှည်လေးကို ပေါင်ရင်းနားထိခွဲထားပြီး ဖဲသား dress အပေါ်မှာ bomber jacket ကို ဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့ ဖဲသား dress လေးပေါ်မှာ ပေါ်လွင်နေတဲ့ bomber jacket လေးကတော့ Coach ကထုတ်လုပ်ထားတာပါတဲ့နော်။ အခုချိန်မှတော့ လူအများကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တဲ့ အင်္ကျီတစ်ထည်လည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ တခြား accessories တွေကတော့ ခပ်မိုက်မိုက်ဆွဲကြိုးအရှည်နဲ့ နာကွင်းလေးလောက်ဘဲ ဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Selena ပုံလေးတွေကို တစ်ချက်ရှိုးလိုက်နော်…..
OUR BABY IS SERVIN LOOKS ? — @sel ?
A post shared by Selena Gomez ♡ (@sexlikeselena) on Feb 2, 2018 at 10:46pm PST
Tags: Selena Gomez, Thigh High Split Maxi Dress
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက်နေ့မှာ ချစ်စရာသမီးလေးမွေးခဲ့တဲ့ Kylie Jenner
Bristol Studio x adidas တို့ရဲ့ Fall/Winter 2018 Collaboration